के तपाईंको वाई-फाई राम्रोसँग चलेन ? यस्ता छन् समाधानका ११ उपाय - टि. एल. एन पोस्ट
Home जानकारी के तपाईंको वाई-फाई राम्रोसँग चलेन ? यस्ता छन् समाधानका ११ उपाय
केही समयका लागि घरमै बसेर काम गर्दै हुनुहुन्छ, अथवा अनलाइन क्लास भइरहेको छ । तर इन्टरनेट स्पिडमा समस्या देखिँदा हैरान हुनुहुन्छ भने तपाईंले आफ्नो वाई-फाईलाई अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ । आज हामी तपाईंलाई आफ्नो वाई-फाईमा देखिने समस्या हटाउने केही उपायहरुको बारेमा बताउँदै छौं ।
१. राउटरलाई यथास्थानबाट सार्नुहोस्
राउटरलाई राखेको स्थान परिवर्तन गर्दा इन्टरनेट स्पीडमा धेरै सुधार आउनसक्छ । दराज, बुकसेफ, वाल अथवा कपबोर्ड माथि राउटर राख्नु भएको छ भने तपाईंको इन्टरनेट स्पिड धेरै स्लो हुनसक्छ । तपाईंले आफ्नो घरको राउटर झट्ट नदेखिने गरी लुकाएर राख्नुभएको छ भने, इन्टरनेट स्पीड धिमा हुनसक्छ । तसर्थ सकेसम्म राउटरलाई घरको केन्द्र अर्थात बीच भागमा राख्नुहोस् ।
राउटर जडान गर्दा रचनात्मक हिसाबले राख्नुपर्ने हुन्छ । राउटर राखिएको स्थान आफू नजिक हुन त्यति जरुरी छैन । बरु त्यसको साटो सबै उपकरणमा सजिलै कनेक्ट गराउन सकिने स्थानमा हुँदा राम्रो हुन्छ । त्यसैले सम्भव भएसम्म उपयुक्त तथा अग्लो स्थानमा राख्नुहोस् । जसले गर्दा तपाईंको राउटरले राम्ररी काम गर्न सक्दछ ।
२. इथरनेट केबलको प्रयोग गर्नुहोस्
अझैपनि हामीले तारको प्रयोग गरेर इन्टरनेट चलाउन सक्छौँ । तार जडित कनेक्सन बिनातारको कनेक्सनभन्दा राम्रो हुन्छ । यसो गर्दा अरु डिभाइसको गतिविधिले असर पनि पार्न सक्दैन । निश्चित स्थानभन्दा वर/पर रहेर चलाउन नसकिने हुँदा यो विधि त्यति सुविधाजनक भने नहुन सक्छ ।
३. च्यानल अथवा ब्याण्ड परिवर्तन गर्नुहोस्
वाई-फाई सिग्नल विभिन्न च्यानलहरूमा विभाजित भएको हुन्छ । राउटरका त्यस्ता च्यानलमा रहेको वाई-फाई सिग्नलले नै विभिन्न उपकरणमा सञ्चार गर्छ ।
नजिकैको कुनै घरमा तपाईंको जस्तै समान वाई-फाई च्यानल प्रयोग भइरहेको अवस्थामा इन्टरनेट स्पिडमा समस्या आउने गर्छ । यस्तो समस्या समाधानका लागि राउटरमा भिन्दाभिन्दै अर्थात छिमेकीको वाई-फाई राउटर चलिरहेको भन्दा फरक च्यानलमा सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हरेक च्यानलले फरक हिसाबले सिग्नल ह्यान्डल गर्ने गर्दछन् । जसको बारेमा थाहा पाउन राउटरसँगै आउने कागजात अथवा अनलाइनमा इन्स्ट्रक्सन जाँच गर्न सक्नुहुन्छ ।
तर त्यसको लागि तपाईंले डिभाइस सेटिङमा अप्सन पत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि १,६ अथवा ११ च्यानलहरूमा एकपटक प्रयास गरेर हेर्नुहोस् ।
अहिलेका नयाँ राउटरहरूमा डुअल ब्यान्ड प्रविधि प्रयोग भएको हुन्छ । जसमा २.५ गिगाहर्ज र ५ गिगाहर्ज को फ्रिक्वेन्सिमा सिग्नल प्रसारण हुन्छ । राउटरमा मिलेसम्म प्राथमिकता अनुसार फ्रिक्वेन्सी सेटअप गर्नुहोस् ।
५ गिगाहर्जको फ्रिक्वेन्सीमा इन्टरनेट कनेक्सन सबैभन्दा छिटो हुन्छ । तर यसको कभरेज भने छोटो दुरीसम्म मात्रै रहेको हुन्छ । तर २.४ गिगाहर्जको फ्रिक्वेन्सीमा ५ गिगाहर्जको तुलनामा ठीक उल्टो अर्थात कभरेज फराकिलो तथा स्पिड कम पाइन्छ ।
४. राउटर अपग्रेड गर्नुहोस्
मूल्य र सुविधा अनुसार राउटरको कार्य क्षमता पनि फरक हुनसक्छ । सामान्यतया राउटर अपग्रेड गरी कनेक्सन प्रसारणको सीमा बढाउन सकिन्छ ।
तपाईंसँग २.४ गिगाहर्जको सिङ्गल ब्यान्ड राउटर छ भने सकेसम्म डुअल ब्यान्ड राउटर लिन सक्नुहुन्छ । घर ठूलो छ अर्थात तपाईंलाई वाई-फाईको फराकिलो कभरेज चाहिएको छ भने दुई वा तीन ‘रिपिटर’ सपोर्ट गर्ने राउटर लिनुहोस् । तर सानो घर अथवा अपार्टमेन्टको लागि भने सामान्य किसिमको राउटर नै पर्याप्त हुनसक्छ ।
५. वाइफाई एक्स्टेन्डर प्रयोग गर्नुहोस्
यदि राउटरको सेटिङ मिलाउन झन्झटिलो लाग्छ र तपाईंसँग केही पैसा छ भने वाई-फाई एक्स्टेन्डर वा रिपिटर खरिद गर्नुहोस् । त्यसलाई स्पेयर वाल सकेटमा प्लग इन गरी वायेरलेस रुपमा कनेक्ट गराउनुहोस् र त्यसैगरी आवश्यकता अनुसार थप विस्तार गर्नुहोस् ।
यो प्रयोग एकदमै सजिलो र सरल हुन्छ । तर यसरी विस्तार भएको कनेक्सन सिधा राउटरबाट प्रसारित भए जस्तो बलियो भने नहुन सक्छ । इन्टरनेट स्पिडका लागि राउटरको अवस्थिति यहाँनिर पनि निर्भर हुने गर्दछ ।
६. विद्युतीय तारको प्रयोग गर्नुहोस्
एक्स्टेन्डरको एउटा विकल्पको रुपमा पावरलाइन किटलाई पनि लिन सकिन्छ । डिजिटल सिग्नलहरू विद्युतीय वायरिङबाट पास हुनसक्छन् र यसको फाइदा उठाउनकै लागि पावरलाइन डिभाइसहरु डिजाइन गरिएका हुन्छन् ।
नेटगियर, टीपी-लिङ्क लगायतका उत्पादनकर्ताहरुले यस्ता पावरलाइन किट बनाउने गर्दछन् । यसले कसरी काम गर्छ भनेः तपाईंले राउटरमा एउटा पावरलाइन प्लग जोड्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि प्लगलाई वाल सकेटमा जोडनुपर्ने हुन्छ ।
अर्को पावरलाइन प्लग घरको अन्य कुनै कुनै कोठामा जड्नुहुन्छ । यसले उक्त कोठामा तारयुक्त अथवा ताररहीत दुवै किसिमको कनेक्सन तयार पार्दछ । यसो गर्दा स्पिडमा केहि फरक पर्नसक्छ, तर यो एउटा प्रभावकारी विकल्प हो ।
वाई-फाईमा पासवर्ड राख्नेकुरा भनिरहनु त पर्दैन । तर, खञ्चुवा छिमेकीका साथै ह्याकरहरूबाट सुरक्षित रहनका लागि वाई-फाईमा पनि बलियो पासवर्ड राख्नु जरुरी हुन्छ । त्यस्तै एएसई इन्क्रिप्सन राख्न पनि नभुल्नुहोस् । जसले तपाईंलाई उच्चतम सुरक्षाका साथै इन्टरनेट स्पिडमा असर पर्न पनि दिँदैन ।
८.प्रयोगविहीन उपकरण डिसकनेक्ट गर्नुहोस्
अनावश्यक अथवा प्रयोग बिहीन दर्जनौं उपकरणहरू राउटरमा कनेक्ट भइरहँदा पनि स्पिडमा समस्या आउन सक्छ । इथरनेटको माध्यमबाट जोडिएका अनावश्यक डिभाइसहरू पनि डिसकनेक्ट गर्नुहोस् ।
कनेक्सन आवश्यक भएका उपकरणमा मात्र इन्टरनेट जोड्नुहोस् । यद्यपि राम्रा तथा गुणस्तरीय राउटरहरूले विशेष उपकरणलाई स्वतः प्राथमिकतामा राख्ने समेत गर्दछन् । जसले गर्दा कसैले फेसबुकमा लाइभ स्टिमिङ गर्दैछ भने तपाईंको भिडिओ गेममा असर पर्दैन ।
९. आफ्नो कम्प्युटर जाँच्नुहोस्
यो सुझाव विशेषगरी कम्प्युटरसँग सम्बन्धित छ । तपाईंको कम्प्युटर तथा ल्यापटपमा इन्टरनेट स्पिडको समस्या देखिएको छ, तर अन्य डिभाइसमा ठीकठाक चलिरहेको छ भने, कम्प्युटर अथवा ल्यापटपको ‘टास्क म्यानेजर’ वा ‘एक्टिभिटी मनिटर’ खोलेर कुनकुन प्रोग्रामहरू चलिरहेका छन्, चेकजाँच गर्नुहोस् ।
केही प्रोग्रामहरू स्वतः अपडेट हुनेगरी सेटअप भएका हुनसक्छन् । जसको कारण तपाईंको इन्टरनेट कनेक्सन स्लो हुन्छ । त्यसैले सेटिङ चेकजाँच गरी मिलाउनुहोस् ।
१०. राउटर री-स्टार्ट गर्नुहोस्
वेबसाइटमा यो सुझाव हामीले धेरै देख्न सक्छौँ । तर यो अनावश्यक जस्तो लाग्छ । राउटरलाई नियमित रुपमा रि-स्टार्ट गर्ने उपाय डिजिटल युगमा अस्वाभाविक पनि लाग्न सक्छ ।
तर राउटर रि-स्टार्ट गर्दा धेरैजसो समय इन्टरनेट स्पिडमा देखिने समस्या समाधान हुन सक्दछ । तपाईंले २.५ गिगाहर्जको फ्रिक्वेन्सीमा राउटर चलाइरहनु भएको छ र स्पिडमा समस्या आइरहेको छ भने रिबूट गर्दा स्पिडमा सुधार हुनसक्छ ।
तर ५ गिगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीमा छ भने तपाईंको इन्टरनेट स्पिड स्वतः बढेर जान्छ । तसर्थ तपाईंले स्पिडको चिन्ता नै लिनुपर्दैन ।
११. इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग सम्पर्क गर्नुहोस्
माथि उल्लेखित सबै उपायहरू अपनाउँदा समेत इन्टरनेटको समस्याबाट छुट्कारा पाउनु भएन भने, आफ्नो इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् । जसले तपाईंको इन्टरनेट स्पिडमा कस्तो समस्या हो र कसरी समाधान हुन सक्छ भनेर आवश्यक सुझाव तथा समाधान दिन सक्छन् ।
Previous articleभिडियोमा हेर्नहोस् घानीले देश छाड्दा देखिएको दृश्य
Next articleऋचाले ‘कमेडी च्याम्पियन २’ छाड्ने
महिलाले अँगालो हाल्दा तनाव कम हुने अनुसन्धानकर्ताको दाबी
कस्तो अवस्थामा तपाईंको मत बदर हुन्छ? जानी राखौं
के हो नयाँ बर्षको पहिलो दिनमा मात्र फुल्ने नेपालमा मात्र पाईने अनौठो फूल ?
चीनमा पनि देखियो ओमिक्रोन भेरियन्ट
शेयर बजारमा आज पनि पहिरो, नेप्से २२ सय ८२ विन्दुमा झर्‍याे